कलाकारले नै आफ्नो क्रेज घटाए :यमप्रसाद ओली,प्रोडक्सन डिजाइनर - राष्ट्रखबर
अन्तरवार्ता कलाकारले नै आफ्नो क्रेज घटाए :यमप्रसाद ओली,प्रोडक्सन डिजाइनर
कलाकारले नै आफ्नो क्रेज घटाए :यमप्रसाद ओली,प्रोडक्सन डिजाइनर
August 24, 2020 August 24, 2020 rastrakhabar 0
पहिला-पहिला चलचित्रमा प्रोडक्सन डिजाइनर राख्ने चलन थिएन, जसका कारण फिल्म छायाँकनमा बाधा-अड्चन आउँथ्यो । प्रोडक्सन डिजाइनरले आफ्नो डिजाइनमा काम गर्न थालेपछि निर्मातासँगै होल टिमलाई ठूलो राहत मिल्न थालेको डेढ दशकदेखि प्रोडक्सन डिजाइनरको रुपमा काम गर्दै आइरहेका यमप्रसाद ओली बताउँछन् । अहिले फिल्म निर्माणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरणसहितको प्रोडक्सन हाउसहरु नेपालमै खुलेका कारण ठूलो जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले सानो–सानो कुराका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको सुनाए । एकपछि अर्को चलचित्रमा व्यस्त बनिरहेका ओली फिल्मकर्मीको पहिलो रोजाइमा पर्ने प्रोडक्सन डिजाइनर हुन् । ओलीले आभास, होस्टेल रिटर्नस, बिजुली मेशिन, रुदाने, पुरानो बुलेट, सानो मन, सुखानी सहादत, रिलेसन, प्रोड्युसर, स्कुल, होस्टेललगायतका फिल्ममा काम गर्नुका साथै दर्जनौं म्युजिक भिडियो, लघुचलचित्रहरु, विज्ञापन तथा विभिन्न डकुमेन्ट्रीका साथै विदेशी प्रोजेक्टहरुमा समेत काम गरिसकेका छन् । चलचित्र र कलाकारहरुको पछिल्लो अवस्थाबारे केन्द्रित रहेर गरेको संक्षिप्त कुराकानी :-
० झण्डै डेढ दशक चलचित्रको क्षेत्रमा बिताइसक्नुभएको छ । तपाईंलाई के लाग्छ, कलाकारहरुको क्रेज घटेको हो त ?
कलाकार स्वयम्ले आफ्नो क्रेज घटाएको जस्तो लाग्छ मलाई । आफ्नो फिल्मको प्रमोशनको नाममा कलाकारहरु हल–हल र कन्र्सटहरुमा भेटिन्छन् । त्यसैले आजकाल टिकट काटेर सिनेमा हलभित्र पस्नै पर्दैन कलाकार हेर्न । हलबाहिरै भेटिन्छन् । तपाईं उहाँहरुसँग फोटो खिच्ने कि बोकेर हिँड्ने कि के गर्ने, सबै छुट पाएपछि फिल्म हेर्नकै लागि किन टिकटमा खर्च गरिरहनु ? त्यसैले कलाकारको क्रेजसँगै व्यवसाय पनि घटेको हो ।
० तपाईं सुरुमा यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको अवस्था पनि यस्तै थियो त ?
त्यतिबेला अहिलेको जस्तो मिडिया थिएन । कालो बजाज ट्याम्पु, रिक्सामा माईक राखेर फिल्मको प्रचार गरिन्थ्यो । अहिले व्यक्तिपिच्छे युट्युब, अनलाईन मिडिया, एफएम रेडियो छन्, जसका कारण फिल्मको प्रचारप्रसारमा सजिलो भएको छ । जुन फिल्मका नायक–नायिका हलमै आउनु त्यतिबेला दर्शकका लागि अति नै खुसीकोे कुरा हुन्थ्यो । कुन कलाकार कुन हलमा आउँदैछ भनेर माइकिङ सुनेपछि दर्शक ती हलहरुमा थामिनसक्नु भिड लाग्थ्यो । तर, दर्शकहरुले न कलाकारलाई छुन पाउँथे, न त उनीहरुसँग फोटो खिच्न । हलको बार्दलीमा उभिएर कलाकारले हात हल्लाउँथे । दर्शक त्यसैमा मख्ख हुन्थे । फेसबुक, यूट्युब, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल त्यतिबेला थिएनन् । कलाकारका बारेमा जान्नुप¥यो भने पत्रिका नै किन्नुपथ्र्यो । उनीहरुको अभिनय हेर्न टिकट काटेर हलमै पस्नुपथ्र्यो । त्यसैले त नेपाली चलचित्र लागेका हलहरुमा थामिनसक्नु भीड हुन्थ्यो र व्यवसाय पनि राम्रो हुन्थ्यो ।
० अहिले शुक्रबार चलचित्र रिलिज गर्ने चलन छ । शनिबार प्रदर्शित चलचित्रका कलाकारलाई हलमा भेला गर्ने परिपाटी तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
नयाँ चलचित्र प्रायः शुक्रबार रिलिज हुन्छन् । उक्त फिल्मका निर्माता तथा कलाकारलाई प्रतीक्षा हुन्छ, भोलिपल्ट अर्थात् शनिबारको । किनकि शनिबार सार्वजनिक विदा भएकाले हलहरुमा दर्शकको चाप अरु समयभन्दा बढी हुन्छ । जब शनिबार आउँछ, बिहानैदेखि चलचित्रका कलाकारहरु हल–हल पुग्छन् । फिल्म छुट्ने बेलामा पुग्ने उनीहरु दर्शकको भिडमै पस्छन् वा भनौं भिड पैदा गर्छन् । ती दर्शक उनीहरुकै फिल्म हेर्न आएका हुन् भन्ने ग्यारेन्टी भने हुन्न । किनकि अहिले एउटै हलमा ६–७ वटा फिल्म चलिरहेको हुन्छ । सबै हल एक साथ छुट्दा दर्शकको भिड देखिनु स्वभाविक भए पनि वास्तविकता अर्कै हुन सक्छ ।
० भिडमा सेल्फी खिच्ने र हुटिङ गर्नेहरुको पनि ठूलै जमात देखिन्छ नि  ?
हलको परिसरमा चिनेको कलाकार देख्दा र उभिँदा एकछिन हुटिङ हुनु, सेल्फी खिच्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । तर, कलाकारहरु यसैमा मख्ख छन् । यसबाट आफ्नो स्टारडम कसरी खस्किरहेको छ भन्ने उनीहरुलाई महसुस नै हुँदैन ।
० अहिले रिलिज डेट नजिकिँदै गर्दा कलाकार भेला गरेर कन्सर्ट गर्ने चलन छ, यसमा के भन्नु हुन्छ  ?
हो ट्रेन्ड सुरु भएको छ । चलचित्र रिलिजपूर्व कन्सर्ट आयोजना गर्ने । चलचित्रको पब्लिसिटीका नाममा नायक–नायिकालाई स्टेजमा उभ्याएर नाच्न लगाइन्छ । बेरोजगारहरुको देशभित्र, जहाँ डोजरले बाटो खन्दासमेत भीड जम्मा हुन्छ, चर्चित कलाकारहरुको निःशुल्क नाच हेर्न पाइने भएपछि दर्शक भेला नहुने त कुरै भएन । अनि तीनै दर्शकको भीड हेरेर मख्ख पर्छन् निर्माता । कन्सर्ट हेर्ने भिड हलसम्म भने आउँदैनन् । त्यसैले यो अभ्यासले कलाकारलाई सस्तो बनाउनेभन्दा अर्को कुनै उपलब्धि हासिल भएको देखिँदैन ।
० कलाकार बढी एक्सपोज भएर यस्तो भएको हो ?
हो, पछिल्लो समय कलाकार चाहिनेभन्दा बढी एक्सपोज भएका छन् । कलाकार सर्वसुलभ हुँदा उनीहरुको स्टारडम कमजोर बनेको छ । कलाकार जहाँ पनि उपलब्ध हुन्छन् । उनीहरुको अभिनय र नृत्य दर्शकले निःशुल्क हेर्न पाएका छन् । सपिङ मल, बाटोघाटो, पार्टी भोजमा कलाकारको उपस्थिति सजिलै हुन्छ । कलाकार सस्तो बन्दा दर्शकले बेवास्ता गर्नु स्वभाविक नै हो । आफ्नो उपस्थित कहाँ, कसरी जनाउने भन्ने कुरा उनीहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
कोरोनालाई डा.डिआरको चिठी
अग्रभागमा खटिने टोखा नगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई १५० प्रतिशत भत्ता